UMohale uchitha eyokutholelwa nguSomizi umsebenzi
UMOHALE Motaung-Mhlongo uzobonakala emdlalweni iRhythm City nala ezolingisa khona indawo yeqola elitshala izimali emabhizinisini kodwa ligcine libaleke nayo. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UMYENI kaSomizi Mhlongo-Motaung, uMohale Motaung-Mhlongo uthi ngeke azithele ngabandayo ngamathuba omsebenzi endimeni yezokungcebeleka ngoba ebalekela ukuthi abantu bazothi usizwa yisithandwa sakhe esihlonishwayo kule ndima.
UMohale ukhulume kanje ohlelweni oludlala kuSABC 3, iTrending SA lapho aphendule khona ukungamukelwa kahle kwezindaba zokuthi usejoyine iRhythm City.
“Abantu balindele ukuthi ngihlale ngingenzi lutho ngoba nakhu ngishade nosaziwayo. Ngeke ngizibeke icala ngokushada noSomizi, futhi ukushada kwethu akusho ukuthi sekumele ngisonge izandla ngingawabheki amathuba ngoba nakhu ngibalekela ukuthi abantu bazothi uSomizi ongitholela wona,” kusho uMohale.
Uthe abantu abebegxeka ukuqashwa kwakhe kwiRhythm City abazi lutho ngokuthi uwuthole kanjani lo msebenzi. Uveze ukuthi wahambela inhlolokhono futhi wayengekho yedwa njengokusho kwabenye ezinkundleni zokuxhumana.
“I-agent yami yangithumela i-email ingazisa ukuthi ngikhethiwe nabanye abayisithupha, ngaqopha ivideo yami ngabathumela.”
KwiRhythm City uMohale uzobe elingisa indawo kaKudzo, uzoqala ukubonakala kulo mdlalo namhlanje.
ULerato Maboi wakwa-e.tv, uthe akusekude ababukeli babone abantu abasha iningi labo okungosaziwayo bakuleli abazofika isikhasha bahambe futhi.
“Kulo mdlalo uMohale ufika njengomphathi wenkampani enkulu yamaselula.
“Izinto zimhambela kahle njengoba enabaxhasi abenza ibhizinisi lakhe lihambe kahle kakhulu futhi uba nemihlangano nezinkampani ezinkulu njengoba efuna ukuqhubeka nokukhulisa ibhizinisi, atshale nemali kwezinye izinkampani,” kuchaza uLerato.
Uthe abangakwazi abantu baselokishini iRhythm wukuthi uKudzo uyiqola elifuna ukufaka imali yalo emcimbini iKilowatt Festival, okuwumcimbi owenziwa yindodakazi kaDavid Genaro, uPearl.
“UPearl akufunayo okwamanje wukuziphindiselela kubantu ababulala uyise.
“Okunye afuna ukukwenza wukudla imali kaSuffocate. Ukufika kukaKudzo kushiya imibuzo ngokuzokwenzeka kuSuffocate nokuthi njengoba uPearl esematasa ngokuthungatha abantu ababulala uyise uzoyibona yini into eyenziwa wuKudzo ebhizinisini lakhe? Yilokho-ke ababukeli okumele bakulinde,” kuchaza uLerato.
Uthe muva nje lo mdlalo ubukwa ngabantu abangu-3.5 million nsuku zonke okungeminye yemidlalo emikhulu kuleli.
* I-Rhythm City ikhonjiswa ngo-7 ebusuku ku-e.tv.